एक सफल च्याट मार्केटि Program कार्यक्रम को निर्माण को लागी3कुञ्जी | Martech Zone
एआई च्याटबटले अझ राम्रो डिजिटल अनुभव र बृद्धि ग्राहक रूपान्तरण को लागी ढोका खोल्न सक्छ। तर उनीहरु तपाइँको ग्राहक अनुभव ट्यांक गर्न सक्छन्। यहाँ यो कसरी सही प्राप्त गर्ने हो।
आजका उपभोक्ताहरु व्यवसायहरु एक व्यक्तिगत र माग मा एक दिन २४ घण्टा, हप्ताको सात दिन, बर्ष को ३24५ दिन को लागी अनुभव को लागी आशा गर्दछन्। प्रत्येक उद्योग मा कम्पनीहरु क्रम मा आफ्नो दृष्टिकोण को विस्तार गर्न को लागी ग्राहकहरु लाई उनीहरु लाई खोज्न को लागी नियन्त्रण र भुक्तानी ग्राहकहरु मा उच्च स्पर्श अन्तरक्रिया को प्रवाह लाई रूपान्तरण गर्न को लागी आवश्यक छ।
यो माग पूरा गर्न को लागी, धेरै व्यवसायहरु बुद्धिमान च्याट एजेन्टहरु लाई बदलिएको छ। Chatbots विशिष्ट रूप मा अत्यधिक व्यक्तिगत र तत्काल कुराकानीहरु को संचालन गर्न को लागी सुसज्जित छन्, एक साथ क्रेता यात्रा को माध्यम बाट उनीहरुलाई अग्रिम जबकि उनीहरुको आवश्यकताहरु लाई पूरा। सही chatbot तपाइँको ग्राहकहरु लाई सादा अंग्रेजी मा कुनै पनी प्रश्न सोध्न को सट्टा उत्पादन पृष्ठहरु, ब्लग पोष्टहरु, र डाउनलोड गर्न योग्य सामग्री को लागी उनीहरु लाई आवश्यक उत्तर पाउन को लागी पोक गर्न को लागी अनुमति दिन सक्छ। एक परिष्कृत च्याट रणनीति पनि कुराकानी मा मौजूदा ग्राहकहरु को डेटा लाई आकर्षित गर्न को लागी राम्रो संग उनीहरुको आवश्यकताहरु को सेवा र आफ्नो यात्रा को अग्रिम गर्न सक्छन्।
जे होस्, मा र आफैंमा च्याट समाधान एक रामबाण छैन। जबकि प्रभावी chatbots २०-३० प्रतिशत सम्म अनलाइन रूपान्तरण वृद्धि साबित भएको छ, एक खराब योजना बनाई च्याट कार्यक्रम कहिलेकाहीं राम्रो भन्दा धेरै हानि गर्न सक्छ। तर जब एक च्याटबोट कार्यक्रम होशियारी संग योजना बनाईएको छ र कुशलतापूर्वक निष्पादित छ, यो सजिलो बनाउँछ व्यापार को लागी छिटो, अधिक कुशलतापूर्वक, र मापन को लागी नेतृत्व सार्न को लागी।
1. तपाइँको दर्शकहरु लाई पहिलो राख्नुहोस्
तपाइँको एआई च्याट सहायक डिजाइन गर्दा, तपाइँको बजार को बारे मा सोच्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको एजेन्ट को डिजाइन गर्नु पर्छ को आधारमा तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई थाहा छ, उनीहरुको कुराकानी शैली को तपाइँको समझ सहित। के तपाइँको दर्शक हास्य र आकर्षण मनपर्छ? वा उनीहरु सीधै बिन्दुमा पुग्न रुचाउँछन्? एक पटक तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ को संग बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको एजेन्ट को व्यक्तित्व र आवाज को टोन निर्धारण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
हामी पहिले नै जान्दछौं कि निजीकरण कुराकानी अन्तरक्रिया को लागी महत्वपूर्ण छ ...
Consumers० प्रतिशत उपभोक्ताहरु भन्छन् कि उनीहरु एक कम्पनी बाट किन्नु पर्ने अनुभवहरु प्रदान गर्ने बाट खरीद गर्न को लागी अधिक संभावना छ।
50 आँकडा निजीकरण को शक्ति देखाउँदै
त्यहाँ एक व्यक्तिगत स्पर्श परिचय गर्न अनगिन्ती तरिकाहरु छन्। नाम बाट ग्राहकहरु लाई सम्बोधन गरेर र उनीहरुको व्यक्तिगत प्राथमिकताहरु को बारे मा उनीहरुलाई उनीहरुको आवश्यकताहरु को लागी दर्जी को रूप मा तपाइँको उत्पादन वा सेवा को अनुभव गर्न को लागी उनीहरुलाई सोधेर शुरू गर्नुहोस्। जति धेरै तपाइँ तपाइँको ग्राहक को बारे मा जान्नुहुन्छ, सजीलो यो तिनीहरुको च्याट समर्थन लाई अनुकूलित गर्न को लागी हुनेछ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एजेन्ट स्थान डेटा को उपयोग गर्न को लागी सुविधाजनक स्थानहरु लाई सpoint्केत गर्न को लागी, उदाहरण को लागी, वा जन्मदिन र विशेष अवसरहरु छुट र कस्टम उत्सव सन्देशहरु लाई प्रस्ताव गर्न को लागी याद गर्न सक्छन्। तर निजीकरण प्रासंगिकता भन्दा बढ्न सक्दैन; यदि एक ग्राहक प्राविधिक सहयोग को लागी देख्दै हुनुहुन्छ, तपाइँको बुद्धिमान च्याट सहायक एक बिक्री फनेल को माध्यम बाट उनीहरुलाई बल दिनु हुँदैन। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि ग्राहकहरु को भनिएको उद्देश्य लाई सम्बोधन गर्न को लागी, कि यसको मतलब सीधा प्रश्नहरु को उत्तर दिन वा उपयोगी संसाधनहरु को लागी लिंक प्रदान गर्ने।
कुराकानी पोषण को लागी अर्को महत्वपूर्ण उत्तम अभ्यास संक्षिप्तता हो। ग्राहकहरु लाई विकल्पहरु संग डुबाउनु को सट्टा ट्रयाक मा राख्न को लागी काट्ने आकार को प्रतिक्रियाहरु को प्रस्ताव, र विशिष्ट खाता विवरण संग सामान्य प्रश्नहरुको जवाफ जब सम्भव छ। यस तरीकाले, तपाइँको एजेन्ट निजीकरण र सान्दर्भिकता संक्षिप्त जवाफ मा दुबै मिलेर र तपाइँको ग्राहकहरु को वास्तविक समय आवश्यकताहरु लाई पूर्वानुमान गर्दछ।
२. सहयोगी र रोचक कुराकानीहरु कि रूपान्तरित बनाउनुहोस्
यो सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँको च्याट एजेन्ट को रूप मा सम्भव को रूप मा उपयोगी छ, यो कुराकानी को सम्भावित प्रवाह बाहिर म्यापि worth लायक छ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँका ग्राहकहरु संग अन्तरक्रिया कसरी प्रकट हुन सक्छ र सफल परिणामहरु, मृत समाप्त हुन्छ, र उनीहरुको सम्भावित प्रतिक्रियाहरु को आधार मा पुनः सगाई रणनीतिहरु को लागी अगाडी योजना बनाउन सक्नुहुन्छ।
तब एक ज्ञान आधार बनाउनुहोस् कि तपाइँको एआई सहायक क्रम मा ती च्याट प्रवाहहरु लाई प्रभावी ढंगले पूरा गर्न मा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको ज्ञान को आधार मा अधिक सामग्री राम्रो; तपाइँ मानक सन्देशहरु, बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु, उपयोगी लि links्कहरु, उत्पादन विवरण, र अधिक समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँको chatbot प्लेटफर्म मल्टीमीडिया सामग्री संभाल्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ आफ्नो ज्ञान को आधार मा ती दृश्य सम्पत्तिहरु लाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, GIFs, भिडियो, स्टिकर, ग्राफिक्स, बटन, र रिच मिडिया सामग्री को अन्य रूपहरु च्याट कुराकानी एनिमेट गर्न सक्छन् र उनीहरु लाई स्क्रीन बाट छलांग बनाउन सक्छन्।
रिच मिडिया सामग्री व्यक्तित्व संग बुद्धिमान च्याट एजेन्टहरु लाई प्रभावित गर्न मद्दत गर्दछ र ग्राहकहरु को लागी यादगार अनुभवहरु सिर्जना गर्दछ, तर सधैं कुराकानी को उद्देश्य याद गर्नुहोस्। तपाइँको ग्राहक को लक्ष्यहरु (र तपाइँको एजेन्ट को क्षमताहरु) को आसपास स्पष्टता को प्राथमिकता सन्तुष्टि सुनिश्चित र उनीहरुलाई जहाँ उनीहरु जाँदैछन् प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछन्; GIFs र स्टिकर केक मा टुक्रा हुनु पर्छ।
३. च्याट सहयोगीहरुको साझा समस्या बाट बच्न
एक बुद्धिमान च्याट सहायक को सबैभन्दा ठूलो लाभ को हो कि उनीहरु समय संगै राम्रो हुन्छ। एआई द्वारा संचालित एजेन्टहरु अनुभव को माध्यम बाट जान्छन् र उनीहरु धेरै र अधिक च्याट पूरा गरे अनुसार सुधार हुनेछन्। त्यो संग भनिएको छ, यो कहिल्यै राम्रो ग्राहकहरु मा एक अप्रशिक्षित च्याटबट ढीला सेट गर्न को लागी एक राम्रो विचार हो। तपाइँको स्टाफ तपाइँको एजेन्ट आन्तरिक परीक्षण गर्नु भन्दा पहिले यो एक व्यापक परीक्षण दर्शकहरु को लागी उपलब्ध गराउन र अन्ततः जनता को लागी रिलीज। तपाइँ लगातार प्रदर्शन को निगरानी र प्रतिक्रिया इकट्ठा गर्न को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँको एजेन्ट वास्तव मा सुधार र सिक्दै छ, पनी पोस्ट प्रक्षेपण।
सफलतापूर्वक तपाइँको बुद्धिमान एजेन्ट को निगरानी गर्न को लागी, प्रदर्शन मेट्रिक्स मा तपाइँ एक दिन बाट ट्रयाक गर्न जाँदै हुनुहुन्छ मा निर्णय गर्नुहोस्। निर्धारण कसरी तपाइँ सफलता मापन र कुल कुराकानी, सगाई दर, अवधि, र हस्तान्तरण र fallback दर जस्तै KPIs पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको एजेन्ट को लागी यसको विशिष्ट लक्ष्यहरु को लागी सुधार जारी राख्न को लागी रेलिंग बनाउन मद्दत गर्दछ, लगातार च्याट पूर्णता तिर पुनरावृत्ति।
कुनै फरक पर्दैन कती सही तपाइँको एआई एजेन्ट हुन्छ, ग्राहकहरु लाई कहिले काहिँ अन्तर्क्रियात्मक अन्य प्रकार को अन्तर्क्रियात्मक को लागी र्‍याम्प को आवश्यकता पर्दछ। बिक्री को एक बिन्दु, प्रत्यक्ष एजेन्ट, वा यहाँ सम्म कि एक समर्पित ईमेल ठेगाना को लागी सजीलो र निर्बाध संक्रमण सिर्जना गर्न र ग्राहक हताशा वा ड्रप-अफ बाट बच्न को लागी हस्तान्तरण मा चिकनी। यहाँ सम्म कि अफ-र्‍याम्प ग्राहकहरु लाई उनीहरुका लक्ष्यहरु हासिल गर्न र उनीहरुलाई फनेल को माध्यम बाट सार्न मद्दत गर्नु पर्छ।
जुनसुकै उद्योगमा तपाइँ हुनुहुन्छ र जो कोही तपाइँको ग्राहकहरु हुनुहुन्छ, बुद्धिमान च्याट पोषण पोषण कस्टम अनुभवहरु लाई रूपान्तरण गर्न को लागी एक शक्तिशाली तरीका हो।
टैग: aiऐ सहायककृत्रिम बुद्धिबोटbotcoBotco.aiकुराकानीच्याट एजेन्टच्याट सहायकच्याट मार्केटिकुराकानी पोषणchatbotबिक्री भित्ता